ကျွန်တော့ရဲ့ IOS Mobile App လေး iTunes ပေါ်တင်မရလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော့ရဲ့ IOS Mobile App လေး iTunes ပေါ်တင်မရလို့ပါ
February 2017 in Mobile Devlopment
App ကတော့ Phonegap နင့်လုပ်ထားတာပါ Key တွေလည်းတောင်းပြီးပါပြီ Mac Book Emulator နင့်လည်း Run လို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ iTunes တင်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ အဲတာ တင်ပေးမဲ့သူရှိရင် အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ Service ခပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ Apple Developer account ရှိပြီးသားပါ ကျွန်တော်က IOS Developer မဟုတ်တော့ သူပြနေတဲ့ Error တွေကို နားမလည်လို့ပါ
ဖိုင်တင်တဲ့နေရမှာ အောက်က Error Message ပြနေတာပါ
" Your file couldn’t be saved. Try again. If the problem persists, contact us."
ပထမဆုံး Xcode ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ App ကို Xcode နဲ့ compile လုပ်ပြီးမှ App store ပေါ်ကို တင်လို့ ရပါမယ်။
App store ပေါ်တင်ဖို့အတွက် Provision profile လိုပါတယ်။ Provision profile ကို app store အတွက် generate လုပ်ပြီး တင်မှ ရပါမယ်။